FIX WINDOWS 10 INACCESSIBLE BOOT DEVICE BSOD, BUG CHECK 0X7B - BSOD
Nohavaozina farany 17 Apr 2022
Taorian'ny fanavaozana Windows 10 vao haingana, mahazo fitaovana boot tsy azo idirana BSOD fahadisoana At Startup? Noho io Error Blue Screen INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE Windows dia manomboka matetika ary tsy manomboka ara-dalàna? Amin'ny ankapobeny, io fahadisoana io dia tsy azo idirana boot fitaovana Fanamarinana bug 0x0000007B dia manondro fa ny OS dia very ny fidirana amin'ny angon-drakitra na ny fizarazarana boot mandritra ny fanombohana. Na ny System dia tsy afaka mamaky ny fizarazarana Windows amin'ny kapila mafy anaovana azy.
Misy antony samihafa mety mahatonga izany fitaovana boot tsy azo idirana BSOD Error amin'ny Windows 10. Mety ho tsy fahombiazan'ny fiara kapila izany, tariby data mifandray malalaka ao anatin'ny rafitra rafitra, ary HDD. Ny rakitra simba indray ao amin'ny fizarana Boot na raha tsy hita ny Bootmgr dia mety hisy hadisoana tsy azo idirana amin'ny fitaovana boot Windows 10.
Powered By 10 OpenWeb CEO amin'ny famoronana Internet salama kokoa, Elon Musk 'Mihetsika toy ny Troll' Partager Fijanonana manaraka
Fitaovana boot tsy azo idirana Windows 10
Raha vao sambany ianao no niaina ity fahadisoana ity dia afaka manampy ny famerenana tsotra.
Esory ihany koa ny fitaovana ivelany rehetra (toy ny HDD ivelany, mpanonta printy, scanner, sns) esory ny klavier sy ny totozy, ary atombohy amin'ny fomba mahazatra ny solosaina mba hahazoana antoka fa misy fitaovana ivelany tsy miteraka olana. Raha tsikaritrareo aorian'ny fanesorana ireo fitaovana ivelany dia nanomboka ara-dalàna ny fikandrana dia fantaro ny fitaovana misy olana ary jereo izany amin'ny solosaina hafa momba ny olana mifanaraka.
Raha mampiasa 2 HDD amin'ny System-nao ianao dia manoro hevitra aho hanala tanteraka ny fiara faharoa.
Ny fotoana sasany very fifandraisana eo amin'ny HDD sy ny rafitra rafitra ihany koa ny mahatonga ity fahadisoana BSOD ity. Raha mampiasa PC Desktop ianao, sokafy ny raharaha ary jereo fa ny tariby SATA dia mifandray tsara eo anelanelan'ny HDD sy System board.
Avereno fotsiny ny rafitrao ary ampidiro ny BIOS amin'ny fanerena F2/del fanalahidy imbetsaka amin'ny fanombohana. F2 no default ho an'ny ankamaroan'ny rafitra miasa, fa raha tsy mety aminao izany dia eo amin'ny efijery POST dia jereo akaiky ny lakile apetraka hiditra ao amin'ny BIOS ary avy eo dia avereno indray ary ampiasao ny fanalahidy mety hidirana ao amin'ny BIOS.
Eto dia mandehana ao amin'ny main -> SATA Mode ary Eto dia mifidiana AHCI Mode fa tsy IDE amin'ny lisitra. Miverena indray mankany amin'ny tabilao boot ary ovay ny Frist Boot ho HDD. Tsindrio ny F10 raha te hitahiry ny fanovana amin'ny setup BIOS ary avereno indray ny windows Check Started normally.
Raha tsy voatanisa ao amin'ny BIOS anao ny kapila boot anao dia mety ho tsy nahomby izany. Manandrama fiara hafa eo amin'ny toerany mba hijerena cable/power/connector. Raha miseho ny fiara hafa, dia mety ho tsy fahombiazan'ny fiara izany. Raha tsy miseho izany dia andramo IDE na seranan-tsambo SATA hafa, tariby ary mpampitohy herinaratra.
Access ny Windows 10 Advanced Startup Options Ary tsindrio eo amin'ny Startup Repair mba hanamarinana sy hanamboatra raha misy tsy hita/kolikoly baotin'ny fikandrana fanamafisam-peo na rindran-tsoratra kolikoly mahatonga ny olana.
Araho ireto zavatra ireto, Raha azonao atao ny miditra amin'ny PC-nao farafaharatsiny fidirana amin'ny efijery:
Amin'ny voalohany, tsindrio ary mihazona Shift avy amin'ny Keyboard ary tsindrio ny bokotra Restart.
Avy eo, mandehana any amin'ny Troubleshoot> Advanced Options> Startup Repair.
Raha tsy afaka miditra amin'ny PC-nao ianao -
Ampidiro ao anaty USB ny Media Windows Bootable ary avereno indray ny PC (Raha tsy manana ianao dia vakio ny fomba Mamorona Media/USB azo bootable )
Tsindrio izay fanalahidy hidirana amin'ny Window setup.
Mandrosoa ary misafidy Amboary ny Solosainao.
Ankehitriny, mandehana Troubleshoot> Advanced Options> fanamboarana fanombohana
Amboary ny singa boot
Aorian'ny fanombohana ny fanamboarana windows dia manomboka ara-dalàna tsy misy hadisoana BSOD. Raha toa ka tsy afaka manomboka indray ny windows avy amin'ny safidy Advanced tsindrio ny baikon'ny baiko ary tanteraho ny baiko etsy ambany
Araka ny noresahina teo aloha, ny antony lehibe ao ambadik'ity fahadisoana tsy azo idirana amin'ny BSOD ity dia ny OS dia very ny fidirana amin'ny angon-drakitra momba ny rafitra na ny fizarazarana boot mandritra ny fanombohana. Mety ho satria ny rakitra master boot record (MBR), ny rakitra fanamafisana ny boot (BCD) dia tsy hita na simba izay mety hiteraka olana. Ary ny fampandehanana ny baiko etsy ambany dia manampy amin'ny fiatrehana ity olana ity.
Alefaso any amin'ny Safe mode miaraka amin'ny tambajotra
Ny ankamaroan'ny fotoana Repair master boot record (MBR) rakitra sy Boot configuration data (BCD) Amboary ny BSOD fahadisoana ary Windows manomboka ara-dalàna. Fa raha mbola mahazo BSOD mitovy Dia mety hisy simba, lany andro na incompatible fampisehoana mpamily mahatonga izany inaccessible_boot_device windows 10 BSOD fahadisoana. Ary koa, Ny rindranasan'ny antoko fahatelo sasany, ny rakitra rafitra simba, ny hadisoan'ny kapila kapila dia mahatonga an'ity Blue screen error ity amin'ny windows 10, 8.1, ary 7. Izany no mahatonga anao mila boot amin'ny fomba azo antoka, Aiza ny windows manomboka amin'ny fepetra takian'ny rafitra kely indrindra ary mamela anao. hanao dingana famahana olana. Vakio ny fomba Alefaso amin'ny fomba azo antoka amin'ny Windows 10, 8.1 .
Scan ary jereo ny kapila mafy raha misy hadisoana
Araka ny noresahina teo aloha ny tsy fahombiazan'ny kapila kapila dia mahatonga ny fitaovana boot tsy azo idirana, na ny OS very ny fidirana amin'ny angon-drakitra na ny fizarazarana boot mandritra ny fanombohana. Ny fampandehanana ny baiko CHKDKS dia tena manampy izay jereo ny kapila kapila ho an'ny lesoka ary amboary raha misy.
Rehefa manomboka amin'ny fomba azo antoka ny windows dia sokafy ny baikon'ny baiko ho mpitantana, ary soraty ny baiko chkdsk c: /r /f ary tsindrio ny bokotra enter. Dia tsindrio Y mba hanamafisana ny fampandehanana ny fisavana kapila amin'ny fanombohana manaraka, Akatona ny baikon'ny baiko, ary avereno indray ny windows. Miandrasa mandra-pahavitan'ny 100% ny fizotry ny fitarafana aorian'izay restart windows ary jereo ny rafitra manomboka ara-dalàna.
Manaova baiko SFC sy DISM
Run ny System fichier checker Utility izay mi-scan sy mamerina raha misy fisie rafitra simba sy tsy hita ka mahatonga ny olana. Mba hanaovana izany Sokafy ny command prompt ho administrateur , Soraty avy eo sfc / scannow ary tsindrio ny bokotra enter. Hanomboka ny fizotry ny fisavana ho an'ny rakitra rafitra simba sy tsy hita izany. Raha hita fa misy fahasimbana, ny fisie tsy hita ao amin'ny SFC dia mamerina azy ireo avy hatrany amin'ny lahatahiry voatsindry hita ao %WinDir%System32dllcache . Miandrasa mandra-100% hamita ny fizotry ny scan, aorian'izay dia avereno indray ny windows ary jereo fa tsy misy hadisoana amin'ny efijery manga tsy azo idirana intsony.
Raha toa ka nahita rakitra simba ny Windows Resource Protection, ny valin'ny fizahana rakitra rafitra, saingy tsy afaka nanamboatra ny sasany tamin'izy ireo, dia mila mihazakazaka ny Fitaovana DISM izay manamboatra ny sary rafitra ary mamela ny sfc hanao ny asany.
Atsaharo ny fanombohana haingana
Rehefa manomboka amin'ny fomba azo antoka ny windows dia sokafy aloha ny Panel Control -> Power Options -> Fidio izay ataon'ny bokotra herinaratra -> Ovay ny Settings izay tsy misy amin'izao fotoana izao -> ary esory ny marika Alefaso ny Fast Startup hanaisotra ny safidy Startup haingana. Izay mamaha ny ankamaroan'ny Windows 10 Ny olana amin'ny fanombohana dia misy ny fahadisoana BSOD, ny fahadisoana amin'ny efijery mainty, sns. Vakio inona ny endri-javatra fanombohana haingana ary nahoana isika no mila manafoana ity endri-javatra ity .
Esory ny fampiharana rehetra napetraka vao haingana
Raha nanomboka niseho ny hadisoana, avy hatrany aorian'ny fametrahanao fampiharana na fametrahana mpamily vaovao. Avy eo dia misy ny vintana fa ity programa vaovao ity dia mety hiteraka fahadisoana. Izany no antony mila esorinao ny fampiharana ao amin'ny Control Panel> All Control Panel Items> Programs and Features. Safidio izao ny Application vao napetraka ary tsindrio ny uninstall.
indraindray Avereno apetraka ny mpamily Device ary Run the Fitaovana Diagnostika fahatsiarovana mba hijerena ny hadisoan'ny fitadidiana Aoka koa ho vahaolana azo ampiasaina hiatrehana BSOD samihafa Windows 10 PC.
Vahaolana mahomby amboarina ireo fitaovana boot tsy azo idirana BSOD lesoka azo ampiharina amin'ny Windows 10, 8.1, ary 7. Ary azoko antoka fa ny fampiharana ireo vahaolana ireo dia mamaha ny hadisoana BSOD ary manomboka ara-dalàna ny PC-nao. Na izany aza, manana fanontaniana, soso-kevitra momba ity lahatsoratra ity aza misalasala miresaka amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany. Vakio ihany koa Vahaolana miasa 7 hamahana ny Windows 10 miadana boot na olana fanombohana 2018